Njengomniki izisombululo amandla smart jikelele ingqalelo kwaye elanga imodyuli umenzi, Prostar lizinikele yokwabelana ishishini layo kunye nabaqeshwa nokwabelana impumelelo kunye namaqabane. E Prostar Solar, imilinganiselo yethu elawula ulwalamano lwethu kunye nabathengi bethu kunye nabanye. Zenza bonke abasebenzi bethu ehlabathini lonke, lonke uhlobo lomsebenzi, ukuqonda thina njengenkampani, oko kuma, kwaye okona kubaluleke kakhulu, ukuba kwenziwe ngayo umsebenzi na. Amaxabiso zethu abhalwe ukuba nokunika isikhokelo, kuba indlela sihambe ngayo ekufezekiseni impumelelo imibandela kangangoko oko kuzuzwe. Sikhuthaza abasebenzi bethu bobabini kunye namaqabane ukuba ukutyebisa ntle kunye kwezoqoqosho igalelo kuphuhliso lwamandla acocekileyo ifikeleleke ngakumbi.
Beka Abathengi Okokuqala
• Safaka umthengi kwiziko zonke izigqibo esizenzayo
• Sidala izisombululo ezilula kunye ezintle kunye nonxibelelwano
• Siqikelela mngeni kwaye ukuzisombulula imiswe
• Siya uhlele yonke imisebenzi, ngokuba ukusebenza kunye ivelisa izisombululo ngcono
• Sakha intsebenziswano enamandla ngaphakathi nangaphandle
• Thina ingqalelo into nge ukuqonda ekwabelwana kwisicwangciso Prostar Solar kunye neenjongo
• Siya amandla smart izigqibo nokuxhasa izigqibo esizenzayo
• Sikhuthaza ezinobungozi kwaye sifunde zombini impumelelo kunye nokusilela
• Sakha ukuthembana, ukuzithemba kunye bazimisela kuwo onke amanqanaba
• Siya enamandla ingokufumana ngendlela engcono kwaye nokuphucula yonke imihla
• Sakha umgangatho kushishino kunye gqolo ukukhulisa bar
• Sizimisele ukufunda ngokukhawuleza, kwaye benza ingxelo eyakhayo mpikiswano ukufumana izisombululo ngcono
Ngaba Right Nto
• Sihlala ukuhlangabezana nezibophelelo zethu nabathengi bethu, abanini-zabelo bethu kunye nabanye
• Thina abayikholelwayo migangatho iphezulu yokuziphatha, ukhuseleko, umgangatho kunye nozinzo
• Sithatha uxanduva yokuphucula umhlaba kunye noluntu apho sisebenza
Yiba Luyingenelo ngendlela ezinzileyo
Siya kukhokelela ishishini lethu kwimpumelelo uzise imbuyekezo oosozabelo nge ngenkuthalo ekusukeleni umbono inkampani, ukuhlala win / ukuphumelela ulwalamano kunye namaqabane ezoshishino, ekwandisa ixabiso kubaxumi.
Yabelana Impumelelo Abasebenzi
Sikholelwa ukuba impumelelo yethu shishini ngokusondeleyo ixhomekeke italente, izakhono, kunye nolwazi lwabantu bethu kunye nokukwazi ukusebenza njengeqela kwimicu ezimanyeneyo. Siyayihlonipha umsebenzi yabantu, siyayikhusela iinzuzo zabasebenzi bethu, sikhuthaza abasebenzi ukuba luvuleleke mngeni kunye nendalo kunye nokubonelela ngenkxaso enamandla ukubanceda ukuphumeza iingcamango ezakhayo. Ukusuka zombini ntle kunye nendlela umsebenzi othile, Prostar Solar wabelana ukukhula kwamashishini kunye nempumelelo kunye namaqela ayo jikelele kuluntu.